Histone deacetylase inhibitors သည်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသ၌ရှိသောမိတ်ဖက်များကြိုက်နှစ်သက်သောဖွဲ့စည်းမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည် (2013) - Your Brain On Porn
နတ် neuroscience ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဇန်နဝါရီ 1, 2014 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
နတ် neuroscience ။ ဇူလိုင် 2013; 16 (7): 10.1038 / nn.3420 ။
ဇွန် 2, 2013 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1038 / nn.3420
hui ဝမ်,*,1,2,3 Florian Duclot,*,1,2 yan လျူ,2,3 Zuoxin ဝမ်,2,3 နှင့် မိုဟာမက် Kabbaj1,2
(ထိုလူမှုရေးအရ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်Microtus ochrogaster), pair တစုံ-ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အမြဲတည်သောမိတ်လိုက်သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်အစပျိုးခြင်းနှင့် oxytocin, vasopressin နှင့် dopamine အပါအဝင် neurotransmitters အမျိုးမျိုးအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ pair တစုံ-နှောင်ကြိုးစည်းမျဉ်းဖြန်ဖြေအလားအလာဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရားဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ histone deacetylase inhibitors ဆိုဒီယမ် butyrate နှင့် TrichoStatin တစ်ဦးက (ည TSA) မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းပြသပါ။ ဤသည်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာကမကထမှာ histone acetylation တစ်ခုတိုးမှတဆင့်, အနျူကလိယ accumbens အတွက်တိကျတဲ့ oxytocin တက်-စည်းမျဉ်း (OTR ကို) နှင့် vasopressin V1a receptors (V1aR) နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ည TSA-facilitated မိတ်ဖက် preference ကိုနျူကလီးယပ် accumbens အတွက်နဲ့ OTR သို့မဟုတ် V1aR ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်တားဆီးခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာက, မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုည TSA အဖြစ် OTR ကိုနှင့် V1aR မျိုးရိုးဗီဇမြှင့၏တူညီသောဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းမှုကိုခံလိုက်ရတယ်။ ယင်းတွေ့ရှိချက်အရှင်ည TSA နှင့်မိတ်လိုက် pair တစုံ-Bond တစ်ခုဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားများကိုဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ရပ်များမှတဆင့်ဖက် preference ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။
လူမှုဆက်နွယ်မှုလူ့လူမှုရေးအပြုအမူတစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ဝိသေသဖြစ်ပါတယ်နှင့်လူမှုရေးသိမြင်လိုငွေပြမှုဘုံ schizophrenia နဲ့အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုမမှန်အပါအဝင်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်များစွာသောလူအတွက် features တွေအဖြစ်စွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများမှာ1။ အဆိုပါလူမှုရေးအရ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogasterဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်-နထေိုငျနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီနှစ်ရှည် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်တည်ထောင်ရန်ကဲ့သို့), လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ neurobiological အခြေစိုက်စခန်း၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မော်ဒယ်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာပါပြီ2-4ပထမဦးဆုံးမိတ်ဖက် preference ကိုခေါ်မိတ်ဖက်ဆီသို့ဦးတည်ရွေးချယ်ဆက်နွယ်မှုအပြုအမူတွေ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်အစပျိုးထားတဲ့5။ မိတ်ဖက် preference ကိုဒီဖွဲ့စည်းရေးအတွက် neuropeptides oxytocin နှင့် vasopressin (AVP) နှင့် mesolimbic dopamine အပါအဝင် neurotransmitters နှင့်ဟော်မုန်းစနစ်များအမျိုးမျိုး, ကပါဝင်ပတ်သက်5.
Iဎယေဘုယျ, မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်နျူကလိယ accumbens (NACC) နှင့် prelimbic cortex အတွက်ယောက်ျားအတွက် ventral pallidum နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum (LS) တွင် AVP neurotransmission မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့နှင့် oxytocin neurotransmission ဖြစ်ပါတယ်6-8.
ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမိတ်လိုက်သည့်သဘာဝဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်, dopamine လည်းမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုတစ်ဦးဝေဖန်ဖျန်ဖြေအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အဆိုပါ dopamine D2-type အမျိုးအစား receptors (D2R) ၏ activation ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လက်တွဲဖော် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်သော်လည်းအဆိုပါ NACC အတွက် dopamine D1-type အမျိုးအစား receptors (D1R) ၏ activation နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်9-11.
အရေးကြီးတာက, oxytocin ၏မျိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်အသီးသီး AVP V1a receptors, OTR ကိုနှင့် V1aR အတွက်မူကွဲ, သူတို့ကိုယ်သူတို့သိသိသာသာမိတ်ဖက် preference ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခုနှစ်, ဥပမာအားဖြင့်အဘို့, NACC အတွက်နဲ့ OTR ၏ overexpression မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်12-14.
pair တစုံဘွန်း၏စည်းမျဉ်းတဘက်, oxytocin နှင့် AVP ကိုလည်းလူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုမှု, ကျူးကျော်များနှင့်မိခင်စောင့်ရှောက်မှုအပါအဝင်, လူမှုရေးအပြုအမူတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွင်းပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနေကြတယ်15, 16။ အထူးသ, ကြွက်များတွင်အဆုံးစွန်သောအပြုအမူများပြတ်တောက်အီစရိုဂျင် receptor alpha ၏ DNA methylation အပါအဝင်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရားအားဖြင့်ကြာရှည် neuroadaptations သွေးဆောင်17 နှင့် AVP ဗီဇ18အဆိုပါ glucocorticoid အဲဒီ receptor ကမကထ၏အဖြစ် histone acetylation19။ အဆိုပါကြွက်ဦးနှောက်အတွက်တိုးမြှင့် histone acetylation မှတဆင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်တိုးမြှင့်ထိုမှတပါး, histone deacetylase (HDAC) inhibitors,20ဤပွောငျးလဲ reverse နိုင်ပါတယ်19နှင့်တိုက်ရိုက်ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception အဖြစ်လူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုး21။ အရေးကြီးတာကတစ်ဦးအဆုတ်ကင်ဆာဆဲလ်လိုင်းထဲမှာ, HDAC inhibitor trichostatin တစ်ဦးက (ည TSA) တိုက်ရိုက်ဒေသအလိုက် histone acetylation မြှင့်တင်နေဖြင့် OTR ကိုကူးယူပိုကောင်းစေပါတယ်22.
ထို့ကြောင့်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအခြေခံအကြံပြုနိုင်ပါသည်။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်နှစ်ခု HDAC inhibitors, ဆိုဒီယမ် butyrate (NAB) နှင့်ည TSA ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ အဲဒီနောကျ, ငါတို့အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကို inducing အတွက်ည TSA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေမော်လီကျူးယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးစဉ်အတွင်းည TSA အားဖြင့်သွေးဆောင်သည့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုကိုပြောင်းလဲကိုလည်းမိတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးခဲ့သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရှာ၏။
ည TSA ကုသမှုမိတ်ဖက် preference ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်
လိင်ရင်တော့မှားမယ်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (intracerebroventricularly ထိုးသွင်းခဲ့ကြicv။ ) CSF သို့မဟုတ် 0.08, 0.4 သို့မဟုတ်4် CSF နှင့်အတူ nတစ်မိတ်လိုက်စရာမလိုဘဲအထီး, သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက် preference ကိုနှင့်အတူချက်ချင်း6နာရီတွဲပြီးမတိုင်မီည TSA ၏ဆထို့နောက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ မိတ်လိုက်စရာမလိုဘဲအထီးနှင့်အတူတွဲပြီးခြောက်နာရီအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသွေးဆောင်ပါဘူး4 ထို့ကြောင့်ဒီအမူအကျင့်ပါရာဒိုင်းကျယ်ကျယ်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်အမျိုးမျိုးသောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြုထားပြီး5.
CSF-ကုသတိရစ္ဆာန်များ (အဖော်ရှာစရာမလိုဘဲတွဲပြီး၏6နာရီနောက်ပိုင်းမိတ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်လူစိမ်းနှင့်အတူ Non-ရွေးချယ် side-by-side အဆက်အသွယ်ပြသt15= 0.76, P = 0.46; သင်္ဘောသဖန်း။ 1a) ။ သို့သော်အားလုံးဆေးများမှာည TSA နဲ့ကုသတိရစ္ဆာန်များကို (လူစိမ်းနှင့်အတူထက်မိတ်ဖက်နှင့်အတူဦးစားအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲစမ်းသပ်ပြီးt8= 4.35, P အဆိုပါည TSA 0.002 များအတွက် = 0.08 nဆအုပ်စုတစ်စု; t15= 3.63, P အဆိုပါည TSA 0.002 များအတွက် = 0.4 nဆအုပ်စုတစ်စု; နှင့် t8= 2.58, P အဆိုပါည TSA 0.03 များအတွက် =4nဆအုပ်စုသည်) ။ အရေးကြီးတာကမျှအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှု (locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်F3,46 = 1.25, P= 0.30, သင်္ဘောသဖန်း။ 1b) နှင့်လူစိမ်းသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ဖြစ်စေဆီသို့ဦးတည်စမ်းသပ်မှုအမျိုးသမီးအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမရန်လိုသည့်အပြုအမူည TSA ၏သက်ရောက်မှုမဟုတ်ဘဲရွေ့လျားဒါမှမဟုတ်လူစိမ်းမှလူမှုရေးခြင်းကိုမနှစ်သက်တစ်ခုအပြောင်းအလဲတချို့မှအလယ်တန်းဖြစ်ခြင်းထက်, တစ်လူမှုရေး preference ကိုမှတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြ, လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
trichostatin တစ်ဦးက (ည TSA) ၏တစ်ဦးစူးရှသောဆေးထိုးမိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ (က) မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်6နာရီအထီးထိတွေ့ Cerebrospinal အရည် (CSF) -treated အမျိုးသမီး Non-ရွေးချယ်ပြသ ...
ည TSA မိတ်ဖက် preference ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ histone acetylation ပိုကောင်းစေပါတယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုသီးခြားအသုတ် 0.4 (ည TSA များ၏အလတ်စားထိုးနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ပါတယ် nဂရမ်) နှင့် 30 မိ,2သို့မဟုတ်9နာရီအတွင်းမိတ်လိုက်၏မရှိခြင်း၌အထီးနှင့်အတူ cohabited ။ အထူးသ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ histone H3 acetylation (Lys14) အဆင့်ဆင့်မသိသိသာသာအပြောင်းအလဲကတော့ NACC နှင့် caudate putamen (နှစ်ဦးစလုံးအတွက်မဆိုအချိန်-Point မှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်P > 0.05 အားလုံးအုပ်စုများအတွက်, သင်္ဘောသဖန်း။ 1c & ။) ။ ဤသည်ည TSA အဆိုပါ NACC ဒါမှမဟုတ် caudate putamen အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ histone H3 acetylation ထိခိုက်မဟုတ်ပေမယ့်မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းပြသသည်။
အရေးကြီးတာက, ဆိုဒီယမ် butyrate ကိုလည်း NACC (ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ histone H6 acetylation (Lys3) တွင်တစ်ဦးတိုးနဲ့ဆက်စပ်မိတ်လိုက်စရာမလိုဘဲ 14 နာရီအထီးနှင့်အတူတွဲပြီးအောက်ပါအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကို facilitatedနောက်ဆက်တွဲပုံ 1) ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်ည TSA ၏ဆိုးကျိုးများ, အရှင် HDAC တားစီးထက်မိတ်ဖက် preference ကို၏ပံ့ပိုးအတွက်ည TSA ၏ non-တိကျတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြံပြုခြင်းနောက်ထပ် HDAC inhibitor နှင့်အတူပြန်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ည TSA တစ်ငါ ​​/ II ကိုပိုပြီးတိကျတဲ့နှင့်ဆှဖှေဲ့လူတန်းစား HDAC inhibitor ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား23, 24နှင့်ည TSA များ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ NAB ထက်ပိုပြီးသိသာဖြစ်ကြောင်း, ကျနော်တို့လေ့လာအောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများအတွက်တိကျသောမော်လီကျူးဆက်စပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် NAB ကျော်ည TSA သုံးစွဲဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
ည TSA-facilitated မိတ်ဖက် preference ကို၏မော်လီကျူးဆက်စပ်မှု
အဆိုပါ vole NACC အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်အဆင့်ဆင့်အတွက်မူကွဲ monogamous နှင့် Non-monogamous voles အကြားကွဲပြားခြားနားသောမိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာများနှင့်အထူးသဖြင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏အပြောင်းအလဲတချို့နှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ပင်12, 13, 25, 26ကျနော်တို့ည TSA-facilitated မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် NACC အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်၏မူကွဲနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ရှိမရှိအကဲဖြတ်။
ည TSA ကုသမှု (0.4 ng, icv။ ) (CSF-ကုသထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကတွဲပြီး၏2နာရီနောက်ပိုင်း NACC အတွက် OTR ကို mRNA အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးသွေးဆောင်t10 = 2.38, P = 0.038, သင်္ဘောသဖန်း။ 2a), ကြောင်း (တွဲပြီး၏9နာရီအကြာတွင်ထောကျခံရဖို့တော်မှာt9 = 2.17, P = 0.058, သင်္ဘောသဖန်း။ 2b) ။ V1aR mRNA အတွက်အနည်းငယ်ပေမယ့်သိသိသာသာမဟုတ်တိုးအဆိုပါည TSA ဆေးထိုးပြီးနောက် NACC2နာရီအတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပေမယ့်, အဘယ်သူမျှမကအခြားအုပ်စုတစ်စုကွဲပြားခြားနားမှု (D1R သို့မဟုတ် D2R အပါအဝင်တိုင်းတာအခြား mRNAs, မဆိုအချိန်-Point တစ်ခုခုမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြP > 0.05, သင်္ဘောသဖန်း။ 2a, ခ) ။ အရေးကြီးတာကမျှအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှု (ဘယ်အချိန်မဆို-Point မှာတိုင်းတာမဆို mRNA များအတွက် caudate putamen အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်P အုပ်စုအားလုံးအတွက်> ၀.၅၅၊ သင်္ဘောသဖန်း။ 2c, ဃ), OTR ကို mRNA အတွက်တိုးလာည TSA-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းအကြံပြုသည့် NACC မှတိကျတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ည TSA များအတွက် 1 ± CSF အုပ်စု2± 100.0%, 11.70%: အ NACC အတွက်နဲ့ OTR နဲ့ V86.7aR mRNA အဆင့်ဆင့်တွဲပြီးမပါဘဲည TSA ဆေးထိုးပြီးနောက်မပြောင်းလဲ 12.11 နာရီ (OTR ကိုကျန်ရစ်အဖြစ်ထို့အပြင်တက်-စည်းမျဉ်းထိုကဲ့သို့သောသာအထီးနှင့်အတူတွဲပြီးအောက်ပါပစ္စုပ္ပန်ခဲ့သည် အုပ်စု, t12 = 0.79, P = 0.444; V1aR: ည TSA အုပ်စု 100.0 ± CSF အုပ်စု 26.24 ± 92.3%, 13.75%, t9 = 0.27, P = 0.791) ။
ည TSA ကုသမှု (0.4 nဆ) အထိ-ထိန်းညှိ oxytocin (OTR ကို) နှင့် vasopressin (V1aR) မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်း၌အထီးနှင့်အတူတွဲပြီးနေစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် receptors ။ OTR ကို mRNA (က, ခ) နှင့်ပရိုတိန်း (င, f) အဆင့်ဆင့်2(က, င) နှင့်9နာရီအောက်ပါထ-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် ...
ပိုမိုမြင့်မားသော OTR ကို mRNA အဆင့်ဆင့်နှင့်အညီသည TSA-ကုသတိရိစ္ဆာန်များလည်း NACC (2 နာရီအတွင်းနှစ်ဦးစလုံးအချိန်-အချက်များမှာပိုမိုမြင့်မား OTR ကိုပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်ပြသ: t10 = 2.34, P = 0.041;9နာရီ: t10 = 3.16, P = 0.01, သင်္ဘောသဖန်း။ 2e, f), ဒါပေမယ့် putamen caudate မဟုတ် (t10 = 0.41, P = 0.69, သင်္ဘောသဖန်း။ 2g, ဇ) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ V1aR mRNA အဆင့်ဆင့်၏အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအပြောင်းအလဲတချို့အတွက်ည TSA ဆေးထိုးပြီးနောက်2သို့မဟုတ်9နာရီမှာ NACC တွေ့ရှိနိုင်စဉ် (သင်္ဘောသဖန်း။ 2a, ခ), အ V1aR ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းသိသိသာသာကို (NACC အတွက် CSF-ကုသတိရိစ္ဆာန်များမှနှိုင်းယှဉ်ပါက,9နာရီမှာတိုးပွားလာခဲ့သည်t9 = 3.46, P = 0.007, သင်္ဘောသဖန်း။ 2f) သော်လည်းမ putamen (caudatet10 = 0.98, P = 0.35, သင်္ဘောသဖန်း။ 2h) ။ အချို့မူကွဲနှင့်တကွ, NACC နှင့် caudate putamen အတွက် D1R နှင့် D2R ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းသိသိသာသာည TSA အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်မထိခိုက်ပေမဲ့ (P > 0.05, သင်္ဘောသဖန်း။ 2e-ဇ).
ည TSA oxtr နှင့် avpr1a ၏ histone acetylation နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်
ည TSA ကုသမှုည TSA ဖွယ်ရှိ၏ကူးယူတိုးပွားလာကြောင်းအကြံပြုတွဲပြီးအောက်ပါ OTR ကိုများအတွက် mRNA နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်အဆင့်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်တိုးလာပြီးနောက် oxtr, အစားပရိုတိန်း၏ဘာသာပြန်ချက်သို့မဟုတ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ပြောင်းလဲထက် OTR ကိုများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇနိုင်တဲ့ coding ။ ထိုမှတပါး, V1aR ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်း (ည TSA ကုသမှုအောက်ပါ mRNA အဆင့်ဆင့်အတွက်အနည်းငယ်ပေမယ့်သိသိသာသာမဟုတ်တိုးနဲ့ဆက်စပ်သည့် NACC အတွက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ကြသဖန်းသီး။ 2) ။ ည TSA အားကောင်းတဲ့လူတန်းစားငါနှင့် II ကို HDAC inhibitor ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား23, 24, 27ကျနော်တို့ည TSA မှာ histone acetylation တိုးပွားလာကြောင်းတွေးဆ oxtr နှင့် avpr1a ထို့နောကျသူတို့ရဲ့ကူးယူတိုးမြှင့်သည့် NACC အတွက်မြှင့်တင်ရေး။ လက်ခံရရှိတိရစ္ဆာန်များ၏အသစ်သုတ် icv။ ည TSA ၏ဆေးထိုး (0.4 nဂရမ်) နဲ့ချက်ချင်းယဇျပူဇျောမခံရမီ 30 မိနစ်အဖော်ရှာစရာမလိုဘဲအထီးနှင့်အတူ cohabited ။ အဆိုပါ 30-မိအချိန်ပြတင်းပေါက်ကြွက်နှင့်ကြွက်များတွင်ဒေသခံည TSA ဆေးထိုးပြီးနောက် histone acetylation ဦးရေအများဆုံးတိုးလာသတင်းပို့ယခင်အလုပ်အပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ခဲ့သည်28, 29။ မှာ H3K14 acetylation oxtr နှင့် avpr1a ဖြစ်မြောက်ရေးထို့နောက် chromatin immunoprecipitative အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။
ယခင်ကလေ့လာတွေ့ရှိ OTR ကို mRNA နှင့်ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးနှင့်အညီ, ည TSA-ကုသတိရိစ္ဆာန်များမှာ histone H460 acetylation အတွက်အလွန်မြင့်တိုး (+ 3%) ပြသ oxtr အဆိုပါ NACC အတွက် CSF-ကုသထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကမျိုးဗီဇကမကထ, (t10 = 5.88, P = 0.0002), မဟုတ် putamen (caudatet9= 0.31, P = 0.76, သင်္ဘောသဖန်း။ 3a) ။ မှာထိုမှတပါး, histone H3 acetylation avpr1a ကမကထသိသိသာသာကို (NACC အတွက်ည TSA အုပ်ချုပ်ရေး (+ 30%) ကိုအောက်ပါမိ 196 သို့ခြီးမွှောကျခံခဲ့ရt10 = 3.12, P = 0.01) သော်လည်းမ putamen (caudatet9= 0.38, P CSF-ကုသထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါက = 0.71), (သင်္ဘောသဖန်း။ 3b) ။ ထို့ကြောင့်, ည TSA အထီးနှင့်အတူတွဲပြီး၏အစအပြီး 30 မိနစ်အဖြစ်အစောပိုင်းအဖြစ် NACC အတွက်အထူး histone acetylation site ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ည TSA ကုသမှု histone acetylation ပိုကောင်းစေပါတယ် oxtr နှင့် avpr1a မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်း၌အထီးနှင့်အတူတွဲပြီးစဉ်အတွင်းဖြစ်မြောက်ရေး။ Histone H3 acetylation (Lys14) မှာ oxtr (က) နှင့် avpr1a (ခ) ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens (NACC) တွင်တိုးမြှင့်သော်လည်းမခံခဲ့ရ ...
ည TSA နဲ့ OTR နဲ့ V1aR ကနေတဆင့်ဖက် preference ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်
စမ်းသပ်ချက်များယခင်အစုံကနေလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမော်လီကျူးမော်ဒယ်တွဲပြီးနေစဉ်အတွင်းသည TSA မှာ histone acetylation potentiates ရှိရာ, ပေါ်ထွက်လာ oxtr နှင့် avpr1a ပရိုမိုးရှင်းများ, ထို့နောကျသူတို့ရဲ့ကူးယူတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တွဲပြီးကာလ၏အစအပြီးတက် 1 နာရီမြင့်မားနဲ့ OTR နဲ့ V9aR ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်ရရှိလာတဲ့။ အဆိုပါ caudate putamen ထိခိုက်ဖြစ်နေဆဲအဖြစ်အရေးကြီး, ဒီည TSA အကျိုးသက်ရောက်မှု site ကို-တိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျွန်တော်နဲ့ OTR နဲ့ V1aR ၌ဤည TSA-သွေးဆောင်တိုးမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ပံ့ပိုးရန်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles 0.04 (ည TSA တစ်ဦးအချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC ဆေးထိုးလက်ခံရရှိnကြိုတင်ထိုးနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲဘက်နှုန်းဂရမ်) (ည TSA ဆေးထိုးမတိုင်မီ 30minutes, 0.5nCSF သို့မဟုတ် CSF နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော OTR ကိုရန်တ OTA (ခ) ပါဝင်သောနှင့် OTA (T) ကို၏ဘေးထွက်နှုန်းဂရမ်), ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး V1aR ရန် (V1aRA) ။ ချက်ချင်းည TSA ဆေးထိုးပြီးနောက်, အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖော် preference ကိုစမ်းသပ်နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်မိတ်လိုက်စရာမလိုဘဲ6နာရီအထီးနှင့်အတူ cohabited ခဲ့ကြသည်။
CSF-ကုသတိရစ္ဆာန်များ (ကမိတ်ဖက် preference ကိုမပြခဲ့ပါဘူးt5 = 0.17, P = 0.87, သင်္ဘောသဖန်း။ 4a) ။ သို့သျောလညျးည TSA-ကုသတိရစ္ဆာန်များ (တိုက်ရိုက် NACC သို့တစ်ခုတည်းည TSA ဆေးထိုးအဖော်ရှာစရာမလိုဘဲမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်လုံလောက်သောကြောင်းအကြံပြုသည် "လူစိမ်း" နဲ့ထက်က "ဖက်" နဲ့ side-by-side အဆက်အသွယ်အတွက်သိသိသာသာပိုပြီးအချိန်ကုန်t5 = 7.04, P = 0.0009) ။ စိတ်ဝင်စားစရာ OTA (ခ) ဖြင့် Pre-ကုသမှုအားဖြင့် OTR ကိုသို့မဟုတ် V1aR ဖြစ်စေ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, OTA (T) ကို, ဒါမှမဟုတ် V1aRA (ည TSA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတားဆီးP > အုပ်စုအားလုံးအတွက် 0.05) ။ အဘယ်သူမျှမအုပ်စုတစ်စုကွဲပြားခြားနားမှု locomotor လှုပ်ရှားမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့သည်အဖြစ် (F4,32 = 1.89, P = 0.14, သင်္ဘောသဖန်း။ 4b) ဤအချက်အလက်များကို NACC အတွက်ည TSA တစ်အပြုအမူ-တိကျတဲ့ထုံးစံ၌ OTR- နှင့် V1aR-mediated ယန္တရားများမှတဆင့်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ည TSA-facilitated မိတ်ဖက် preference ကိုပု oxytocin- (OTR ကို) လိုအပ်တယ်နှင့် vasopressin (V1aR) receptors-mediated အမျိုးသမီးနျူကလိယ accumbens အတွက် neurotransmission ။ နျူကလီးယပ် accumbens သို့ထုံမွှန်းတဲ့အခါမှာ (က) ည TSA 0.04 (မိတ်ဖက် preference ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် nဘေးထွက်နှုန်းဂရမ်), ...
မိတ်လိုက်ည TSA အဖြစ်အလားတူ neuroadaptations induces
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အောက်ပါကျနော်တို့အမျိုးသမီး NACC အတွက် oxytocin နှင့် vasopressin neurotransmission ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအလားအလာမိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်လုံလောက်သောခဲ့ကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤအ neuroadaptations ကိုလည်းမိတ်ဖက် preference ကို၏သဘာဝအဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မိတ်ဖက် preference ကို induces သောမိတ်လိုက်၏ရှေ့တော်၌ 24 နာရီအတွင်းအထီးနှင့်အတူ cohabited ခဲ့ကြသည်4နှင့်ယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ + 1%, ကျနော်တို့လိင်ရင်တော့မှားမယ်အမျိုးသမီး (OTR ကိုနှိုင်းယှဉ်သကဲ့သို့, NACC အတွက်နဲ့ OTR နဲ့ V38aR mRNA နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်အဆင့်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်တစ်ဦးတိုးလေ့လာတွေ့ရှိ t10 = 2.68, P = mRNA များအတွက် 0.02, နှင့် + 58%, t8 = 3.05, P = ပရိုတိန်းအဘို့အ 0.01; V1aR: + 89%, t14= 2.53, P = mRNA များအတွက် 0.02, နှင့် + 26%, t20 = 2.23, P ပရိုတိန်းများအတွက် = 0.037, သင်္ဘောသဖန်း။ 5a, ခ).
မိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီးအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles တစ်ဦးဟာ oxytocin (OTR ကို) ၏ upregulation နှင့် vasopressin နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် (V1aR) receptors (NACC) ဖြစ်ပေါ်သည်။ တက်-ထိန်းညှိနဲ့ OTR (က) နှင့် V24aR (ခ) mRNA နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်မိတ်လိုက်နဲ့အထီးနှင့်အတူ 1h တွဲပြီး ...
OTR ကိုနှင့် V1aR များအတွက် mRNA နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်နှစ်မျိုးလုံးအဆင့်ဆင့်မိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီးတိုးခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့လာမယ့်ဒီတက်-စည်းမျဉ်းတစ်ခုဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး oxtr နှင့် avpr1a မျိုးဗီဇကူးယူ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကသစ်ကိုအသုတ်အရှင်မှာမိတ်လိုက်နှင့် H6K3 acetylation နှင့်အတူ 14 နာရီအထီးနှင့်အတူ cohabited ခဲ့သည် oxtr နှင့် avpr1a chromatin immunoprecipitative ဖြင့်တိုင်းတာဖြစ်မြောက်ရေး။ OTR ကိုနှင့် V1aR mRNA နှင့်ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းနှင့်အညီ, အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မှာပိုမိုမြင့်မား H3K14 acetylation ပြ oxtr နှင့် avpr1a လိင်ရင်တော့မှားမယ်အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ်အဖြစ် NACC အတွက်မြှင့်တင်ရေး (oxtr: t9 = 2.64, P = 0.02; avpr1a: t9 = 2.91, P = 0.017 သင်္ဘောသဖန်း။ 5c, ဃ) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာည TSA ကုသမှုပြီးနောက်ရှုလေ့လာအဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုသွေးဆောင်ကြောင်းတွဲပြီး Paradigm, ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရားကနေတဆင့် NACC အတွက်နဲ့ OTR နဲ့ V1aR စကားရပ်တစ်ခုတက်-စည်းမျဉ်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းသတင်းပို့ပါ။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့အနေနဲ့ HDAC inhibitor ၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့် NACC အတွက် histone acetylation တိုးမြှင့်မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ Tကြက်ကျနော်တို့တိုးလာအထီးနှင့်အတူတွဲပြီးနှင့်မိတ်လိုက်အဖြစ်အမျိုးသမီးအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ကြောင်းတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားများထုတ်ဖော်ပြသ oxtr နှင့် avpr1a အဆိုပါ NACC အတွက်တိုးမြှင့် histone acetylation မှတဆင့်ဗီဇစကားရပ်။ ည TSA အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် NACC သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုနှင့် NACC အတွက် OTR ကို mRNA နှင့်ပရိုတိန်း၏အဆင့်မြင့်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ histone H3 acetylation သည်မှာ histone acetylation တစ်သိသိသာသာသန့်စင်ည TSA-ကုသအမျိုးသမီးအတွက်ထိခိုက်ခဲ့ပေမယ့် oxtr အဆိုပါ NACC အတွက်ကမကထအဖြစ်အစောပိုင်းည TSA အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ 30 မိနစ်အဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် NACC အတွက် OTR ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဟာည TSA-facilitated မိတ်ဖက် preference ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လုံလောက်ခဲ့တယ်. အလားတူဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ပြုပြင်မွမ်းမံမိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီးအောက်ပါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ကတည်းကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကိုသွေးဆောင်သိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာလူမှုရေးအပြုအမူတစ်ခုဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းများအတွက်မော်ဒယ်ရှေ့ဆက်ထားတော်မူ၏။ Dတစ်အထီး, ည TSA, ဒါမှမဟုတ်မိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီး uring လျှင်မြန်စွာမှာတိကျတဲ့ histone H3 acetylation induces oxtr အဲဒီနောက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့သောမြင့်မားနဲ့ OTR mRNA နှင့်ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်ရရှိလာတဲ့၎င်း၏ကူးယူပိုကောင်းစေပါတယ်သော NACC အတွက်ကမကထ။
အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ခုနှစ်, မိတ်လိုက်စရာမလိုဘဲအထီးနှင့်အတူတွဲပြီး၏6နာရီမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသွေးဆောင်ပါဘူး4, ဤအမူအကျင့်ပါရာဒိုင်းမိတ်ဖက် preference ကို၏ induction အပေါ် pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့အသုံးပြုထားပြီး5။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာတော့ saline- သို့မဟုတ် CSF-ကုသထိန်းချုပ်မှုမိတ်ဖက် preference ကိုမဖွံ့ဖြိုးခဲ့ဘူးနေစဉ်, NAB သို့မဟုတ်ည TSA နဲ့ကုသအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ကိုပြု၏။ NAB မဟုတ်သလိုည TSA မခြုံငုံရွေ့လျားထိခိုက်အမျှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် preference ကိုအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုမဟုတ်ဘဲရွေ့လျားအပေါ်အလယ်တန်းသက်ရောက်မှုထက်အပြုအမူ-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သလိုပဲ။ ည TSA ၏ဤတိကျတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်လီကျူးလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်အုပ်ချုပ်ပေမယ့် icv။ ကျနော်တို့က, NACC အတွက်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးကပ်လျက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ caudate putamen ဗီဇထုတ်ဖော်တိကျတဲ့အပြောင်းအလဲတချို့ detect လုပ်ဖို့နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပင် NACC အတွင်း, D1R နှင့် D2R mRNA နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်အဆင့်ကိုထိခိုက်နျြရစျ။ ထိုသို့သောတိကျတဲ့လူတန်းစားငါနှင့် II ကို HDACs နှစ်ဦးစလုံးထိခိုက်ည TSA ကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့် HDAC inhibitor များအတွက်အံ့သြစရာဖြစ်ပေါ်လာသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ည TSA သည့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးရိုးဗီဇအတွက်မျိုးဗီဇကိုသာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအစု၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုထိခိုက်အစီရင်ခံထားသည်30-32, ကြွက်များတွင်အပါအဝင်20.
ကျနော်တို့ဒီမှာမှာ Lys3 အပေါ် histone H14 ၏ acetylation သရုပ်ပြ oxtr ကမကထ, ဦးနှောက် plasticity စဉ်အတွင်းအပါအဝင်တိုးမြှင်ဗီဇကူးယူနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံ33, 34အဆင့်မြင့် OTR ကို mRNA နှင့်ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းမျဉ်းတား။ ည TSA, အမှာ histone acetylation တုံ့ပြန် oxtr ကမကထတိုးနှင့်လူ့ဆဲလ်လိုင်းအတွက်၎င်း၏ကူးယူ၏ activation နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်22ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကြောင့် supporting oxtr ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ NACC အတွက်နဲ့ OTR ၏ဒေသခံတစ်ဦးပိတ်ဆို့ည TSA များ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကာကွယ်တားဆီးဖို့လုံလောက်ခဲ့ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာတွဲပြီးစဉ်အတွင်း NACC အတွက်နဲ့ OTR ၏ည TSA-သွေးဆောင်စကားရပ်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ပံ့ပိုးကမကထပြုခဲ့ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, မိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီး၏ 24 နာရီ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုသွေးဆောင်ဖို့လူသိများနေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အမျိုးသမီး NACC အတွက်နဲ့ OTR စကားရပ်များတွင်အလားတူတိုးသွေးဆောင်။ ဤသည်အမျိုးသမီး voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ neurobiology အတွက် oxytocin နှင့်ယင်း၏အဲဒီ receptor ၏လူသိများပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်အတူပြည့်စုံသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်လိုက်သည့် NACC အတွက် extracellular oxytocin အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုး induces25အဆိုပါ NACC သို့ oxytocin နှင့်ဒေသခံပြုတ်ရည်မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်8။ ထိုမှတပါး, OTR ကို oxytocin အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်မိတ်လိုက်နေဖြင့်သွေးဆောင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း antagonists8, 35။ အရေးကြီးတာက, အမျိုးသမီး NACC အတွက်နဲ့ OTR ၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated overexpression မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်12, 13.
OTR ကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုခိုင်မာရေးအပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုလည်းမိတ်လိုက်၏မရှိခြင်း၌အထီးနှင့်အတူတွဲပြီးစဉ်အတွင်းဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရားမှတဆင့် OTR ကိုဗီဇစကားရပ်တစ်ခု activation အဘို့သက်သေသာဓကသည်။ မိတ်ဖက် preference ကိုသွေးဆောင်ဖို့မလုံလောက်သော်လည်းအမှန်စင်စစ်, အချိန်တိုတိုကာလအဘို့အဖော်ရှာစရာမလိုဘဲထိုကဲ့သို့သောတွဲပြီးမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအခြေခံသည့် neurobiological ဖြစ်စဉ်များမြှင့်လုပ်ဆောင်. ဥပမာ, အထီးအခမဲ့ထိတွေ့မှု၏နှစ်နာရီအမျိုးသမီး NACC အတွက် oxytocin လွှတ်ပေးရန်အတွက်အနည်းငယ်ဒါပေမယ့် Non-သိသိသာသာမြင့်တက်သွေးဆောင်25။ ထို့ကြောင့်ည TSA သို့မဟုတ် NAB မိတ်ဖက် preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့, အထီးနှင့်အတူတွဲပြီးအားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ neuroadaptations potentiate ကြောင်းအဆိုပြုထားနိုင်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, ထိုကဲ့သို့သောအလားအလာပြီးသားလူတန်းစားငါနှင့် NAB နှင့်ည TSA အပါအဝင် II ကို HDAC inhibitors, ထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ဖြစ်ပေါ်ပါဘူးတဲ့သင်ယူမှုအဖြစ်အပျက်၏စုစည်းပြီးလွယ်ကူချောမွေ့ဘယ်မှာကြွက်အစီရင်ခံထားသည်36, 37. တွဲပြီး၏ဤအယူအဆ၏ထောက်ခံမှုခုနှစ်တွင်ပိုရှည်ကာလ (ဥပမာ။ , 48hours) ပင်မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်4. မြှင့်တင်ရန်ည TSA နှင့်မိတ်လိုက်တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းထိခိုက်စေကွောငျးတငျပွထားတဲ့ည TSA ကုသမှုနှင့်အတူတွဲပြီးပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိသောသူတို့အားကဲ့သို့တူညီသောဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုယန္တရား, မှတစ်ဆင့်အမျိုးသမီး NACC အတွက်နဲ့ OTR နဲ့ V1aR စကားရပ်တစ်ခုတက်-စည်းမျဉ်းဖြစ်ပေါ်ဒါဟာမိတ်လိုက်နဲ့တွဲပြီးမှတ်သားဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ် မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း။ အရေးကြီးသည TSA အထီးနှင့်အတူတွဲပြီး၏မရှိခြင်းအတွက်အမျိုးသမီး NACC အတွက်နဲ့ OTR နဲ့ V1aR တစ်ခု upregulation သွေးဆောင်မထားဘူး။ စုစုပေါင်း, ဒီည TSA မဟုတ်ဘဲယင်း၏သည်ဤကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသော neuroadaptations အပေါ်သက်ဝင်ထက်သဘာဝကျကျအထီးနှင့်အတူတွဲပြီးခြင်းဖြင့်အစပျိုး endogenous neuroadaptations ၏အလားအလာမှတဆင့်ဖက် preference ကို၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
Oည TSA-ကုသတိရစ္ဆာန်များသည်အဘယ်သူ၏ပိတ်ဆို့ည TSA-facilitated မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးပိုမိုမြင့်မား V1aR အဆင့်ပြအဖြစ် ur လေ့လာမှုလည်းအမျိုးသမီးရဲ့မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် NACC V1aR ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ထို့အပြင်ဤဆိုးကျိုးများမှာပိုမိုမြင့်မား histone acetylation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် avpr1a non-အကောင်းဆုံးအချိန်-အမှတ်ဖွယ်ရှိကြောင့် V1aR mRNA မရှိသိသိသာသာမြင့်ရှိနေသော်လည်းကမကထ။ ကျနော်တို့ Non-histone ပရိုတိန်း၏ acetylation မှတစ်ဆင့်ည TSA အားဖြင့်ပရိုတိန်းတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုစည်းမျဉ်းထုတ်မအုပ်စိုးလို့မရဘူးပေမယ့်38, ဒီတွေ့ရှိချက်ဟာရန်, ကြောင့်ဆင်တူအကြံပြု oxtr ကမကထသည TSA မြှင့်တင်ရန်စေခြင်းငှါ, avpr1a ဒေသခံ histone acetylation မှတဆင့်ကူးယူ။ အထီးရဲ့ pair တစုံဘွန်းအတွက် AVP များ၏အလှူငွေဖော်ပြထားခဲ့ပြီးနေစဉ်5အဆိုပါအမျိုးသမီးရဲ့အပြုအမူအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုနေဆဲအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းလက်တစ်ခုတွင် icv။ AVP ဆေးထိုး V1aR သို့မဟုတ် OTR ကိုဖြစ်စေ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်တားဆီးသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို voles, နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လက်တွဲဖော် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်39. အခြားတစ်ဖက်တွင်တစ်ဦး icv။ အဆိုပါ V1aR ရန်လုပ်ကွက်၏ဆေးထိုးအထီးအတွက်မဟုတ်အမျိုးသမီးအတွက်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကို, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles40။ သို့သော်ဤအရာအလုံးစုံလေ့လာမှုများကိုအသုံးပြု icv။ ပါဝင်အဆောက်အဦသို့မဆိုထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်တားဆီးထိုး။ ဤတွင်ကျနော်တို့စာပေအများစုဖြစ်သော ventral pallidum, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum, အများ၏အိပ်ရာနျူကလိယအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိ၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဖော်ပြထားတယ်နေစဉ် NACC အတွင်း AVP neurotransmission, အမျိုးသမီး voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သည့်ပထမဦးဆုံးသက်သေအထောက်အထားပေး stria terminalis နှင့်ယောက်ျားပေါင်းအတွက် amygdala5. အမျိုးသမီးရဲ့ NACC အတွက်နဲ့ OTR သို့မဟုတ် V1aR ဖြစ်စေ၏ပိတ်ဆို့ည TSA ကုသမှုအောက်ပါမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်သတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လာထို့ကြောင့်သောမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအကြံပြုခြင်း V1aR နဲ့ OTR နှစ်ခုစလုံး၏ activation လိုအပ်ပါတယ်။ T ကမိမိအတွေ့ရှိချက်, နှင့်အညီများနှင့်အထောက်အပံ့များအတွက် LS အတွက်နဲ့ OTR နဲ့ V1aR နှစ်ဦးစလုံးမှတစ်ဦးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းဝင်ရောက်ခွင့် AVP-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင်းအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အစောပိုင်းကလေ့လာရေးဖြစ်ပါသည်6. ထိုမှတပါး, ည TSA-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်နဲ့ OTR နဲ့ V1aR အဆင့်ဆင့်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်တိကျတဲ့တိုး၏လေ့လာရေးနောက်ထပ်တစ်စုံ Bond များအတွက် AVP နှင့် oxytocin neurotransmissions တစ်ဦးတစ်ပြိုင်နက် activation များ၏လိုအပ်ချက်ထောက်ခံပါတယ်။
oxytocin နှင့် AVP နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခုနှစ်, NACC အတွက် dopamine neurotransmission အမျိုးသမီး voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် modulates9. မိတ်လိုက်သည့် NACC အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန် induces ပေမယ့်9, အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်အတွက်မူကွဲ pair တစုံဘွန်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရန်အရေးကြီးပါသည်, သာမိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီး၏ 24h- ​​ထက်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလ -longer ပြီးနောက်ရှုလေ့လာကြသည်10။ ယင်းတွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, ည TSA နဲ့ကုသအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အဆိုပါ dopamine D1R နှင့် D2R receptors အတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲမရှိဘဲပြပွဲမိတ်ဖက် preference ကိုပြုလေ၏။ ထို့ကြောင့်, dopamine အဲဒီ receptor စည်းမျဉ်း၏ဤမရှိခြင်းည TSA ၏တိကျသောအဘို့အခြားအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာပထမဦးဆုံးအကြိမ် pair တစုံ-ဘွန်း၏ neurobiology အတွက်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အစီရင်ခံစာနှင့်ည TSA အဆိုပါတွဲပြီးမှသဘာဝမော်လီကျူးတုံ့ပြန်မှု potentiating အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် "အလိုလိုပြည်နယ်" induces ကြောင်းအကြံပြုနှင့်ပိုမိုအားကောင်းလူမှုရေး interaction က၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမြှင့်တင် မိတ်ဖက် preference ကိုမှဦးဆောင်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးည TSA-facilitated မိတ်ဖက် preference ကိုထပ်မံခိုင်ခံ့စေ၏နိုင် hypothesize နှင့်ဇွဲနှောင်ကြိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်သွေးဆောင်သည်။ ပါဝင်ပတ်သက်သည့်တိကျသော HDACs ဖော်ထုတ်ခံရဖို့ဆက်လက်တည်ရှိပေမယ့်, က, အရှင်နောက်ထပ်ထိုကဲ့သို့သောရွေးချယ်ကျူးကျော်ခြင်းနှင့် bi-မိဘစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် monogamous ဘဝမဟာဗျူဟာနှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားအပြုအမူတွေအပေါ်ည TSA များ၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်။ လူသားတွေအတွက် pair တစုံဘွန်း၏ neurobiological ယန္တရားများမော်ဒယ်အတွက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ဆက်စပ်မှုစဉ်းစား5ပြီးသားလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ၌၎င်း, အလားအလာ HDAC inhibitors24, 41, 42ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာလူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်အသစ်များကို pharmacological ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်လမ်းခင်း။
လိင်ရင်တော့မှားမယ်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) ထောက်ပံ့ပေးရေနှင့်အစားအစာနှင့်အတူ (21 × 12 × 28 စင်တီမီတာ) တစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းမွေးမြူရေးကိုလိုနီများထံမှအသက် 16 ရက်ပေါင်းမှာနို့နှင့်ပလပ်စတစ်အိတ်များအတွက်လိင်တူချင်း sibling အားလုံး၌ကျိန်းဝပ် ကြော်ငြာ libitum။ 14 ဇအလင်း-မှောင်မိုက်သံသရာနှင့်အပူချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခဲ့: အားလုံးလှောင်အိမ်တစ်ခု 20 အောက်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ သူတို့အသက် 70-90 ရက်ပေါင်းရောက်ရှိသည့်အခါအားလုံးတိရိစ္ဆာန်များကျပန်းစမ်းသပ်အုပ်စုများသို့တာဝန်ကျတယ်။ အသုံးပြုသောတိရစ္ဆာန်များ၏အရေအတွက်မှာတစ်ဦးအာဏာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အတူပေါင်းစပ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနှင့်အခြားသူများအားဖြင့်လယ်ပြင်၌ယခင်လေ့လာမှုများ, အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ စမ်းသပ်လုပျထုံးလုပျနညျးဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အတု cerebrospinal fluid ကိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘော (CSF, BioFluids, Rockville, MD) အတွက်ဖျက်သိမ်းဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းဆိုဒီယမ် butyrate (NAB), နှင့် Trichostatin တစ်ဦးက (ည TSA), နှစ်ဦးစလုံး Sigma-Aldrich (စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ NAB (intraperitoneally ထိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်ip) ကြွက်များတွင်အများအပြားဟာဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ histone acetylation သွေးဆောင်သိသော 600 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်တစ်ထိုးမှာ43, 44။ အလားတူပင်ည TSA အတှကျအသုံးပွုဆေးထိုး-range ကိုကြွက်များတွင်မျိုးဗီဇစကားရပ်များတွင်ဒေသခံ histone acetylation ဖြစ်ရပ်များနှင့်ကွဲလွဲ inducing အတွက်၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုအဆုံးအဖြတ်ယခင်အလုပ်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်19, 20။ အဆိုပါရွေးချယ် V1aR အဲဒီ receptor ရန် V1aRA, d(CH2)5[Tyr (ငါ့ကို)] AVP, နှင့် OTR ကိုရန် OTA (ခ) [d(CH2)5, Tyr (ငါ့ကို)2, Thr4, Tyr-နယူးဟမ်းရှား29] -OVT), Bachem (Torrance,, CA) မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကစက္ကန့်, ပိုမိုရွေးချယ် OTR ကိုရန်, OTA (T) ကို, dGly-နယူးဟမ်းရှား2-d(CH2)5 [Tyr (ငါ့ကို)2, Thr4] OVT45, ကြင်နာစွာဒေါက်တာမောရစ် Manning (Toledo, OH တက္ကသိုလ်) ကထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရသည်။ အသုံးပြုသောဤအရန်များနှင့်ဆေးများအသီးသီး V1aR သို့မဟုတ် OTR ကိုဖြစ်စေဘို့မိမိတို့ select လုပ်သရုပ်ပြသည်ယခင်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးကောက်တော်မူပြီ35, 39, 46-49.
-1 မီလီမီတာမှာနှာခေါင်းဘား, 10 မီလီမီတာ; အမျိုးသမီး stereotaxically တဖက်သတ် (ကိုထညျ့သှငျးဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြဆိုဒီယမ် pentobarbital (26mg / 2.5g ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်) နဲ့ anesthetized နှင့် 0.6 သံမဏိလမ်းညွှန် cannulae (ပလတ်စတစ်တစ်ခုမှာ, ရော့, VA သို့) မှန်းခဲ့ကြသည် အဆိုပါ NACC မှ site ကို-အထူးသ rostral, 1.0 မီလီမီတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် bregma မှ 2.6 မီလီမီတာ ventral) သို့မဟုတ် (မြန်မာနိုင်ငံသ; -2.5 မီလီမီတာ, 1.7 မီလီမီတာ rostral, ± 1.0 မီလီမီတာနှစ်နိုင်ငံနှင့် 4.5 မီလီမီတာ ventral မှာနှာခေါင်းဘား bregma မှ) ။ ပြန်လည်နာလန်ထူ၏3ရက်ပေါင်းပြီးနောက်ဘာသာရပ်များ CSF သို့မဟုတ်ည TSA ၏ကွဲပြားခြားနားသောပြင်းအား် CSF ဖြစ်စေ၏ microinjections ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ OTR ကိုသို့မဟုတ် V1aR များအတွက်ရွေးချယ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်တဲ့အခါသူတို့ကကြိုတင်ည TSA မှ 30 မိနစ်ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ ထိုးဆေးကို (နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle သို့ 33 nL တစ်ဦးဆေးထိုး volume ထဲမှာ, ပစ်မှတ်ဧရိယာသို့လမ်းညွှန် cannula အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 1 မီလီမီတာတိုးချဲ့တဲ့ 500 gauge အပ်နှင့်ဖွဲ့ခဲ့ကြicv။ ) သို့မဟုတ် 200 nL ဘက်လျင် NACC သို့။ polyethylene-20 Tube နှင့် plunger စိတ်ကျရောဂါမှတဆင့်တစ်ဦး Hamilton ကဆေးထိုးအပ် (Hamilton က, Reno, NV) ကိုချိတ်ဆက်ခဲ့အပ်ဆေးထိုးနှုန်း 1 မိနစ်လိုအပ်နှေးကွေးစွာဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများအဆုံးမှာအားလုံးဘာသာရပ်များအမြန်ယင်းသို့ခေါင်းဖြတ်စီရင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ဆဲအခြေအနေမျက်စိကန်းလေ့လာသူများက cannulae နေရာချထားအတည်ပြုရန်ဖြည်ဦးနှောက်အားဖြင့်ယဇ်ပူဇော်ကြ၏ခဲ့ကြသည်။ နေရာထား cannulae နှင့်အတူဘာသာရပ်များ data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်။
တွဲပြီးနှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်
ထိုခဏခြင်းတွင်အောက်ပါ ip., icv။ , ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအချင်းချင်းအပြန်အလှန် NACC ထိုး, အမျိုးသမီးမိတ်လိုက်စရာမလိုဘဲ6နာရီအထီးနှင့်အတူ cohabited ခဲ့ကြသည်။ မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားအပြုအမူကိုဆန်းစစ်ကစိစစ်ခဲ့သည်။ မိတ်လိုက်နှင့်အတူတွဲပြီးခြင်းဖြင့်အစပျိုးသည့် neuroadaptations ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဘို့, အီစထိုဂျင်-ရစေတယ်အမျိုးသမီး (တစ်နေ့လျှင်2μg, ip။ ,3နေ့ရက်ကာလအဘို့)6သို့မဟုတ် 24 နာရီအတွင်းအထီးနှင့်အတူ cohabitated ဖြစ်. , မိတ်လိုက်၏ရှေ့မှောက်တွင်စစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့သည် တစ်ဦး posteriori ဗီဒီယိုတိတ်ခွေအပေါ် (တွဲပြီး၏ပထမဦးဆုံး6နာရီအတွင်း 11 ထံမှ6အကြိမ်ကြိမ်အထိ) ။
အဆိုပါမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့,6နာရီတွဲပြီးအောက်ပါချက်ချင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည်11။ အတိုချုပ်အားဖြင့်အခန်းသုံးခန်းစမ်းသပ်မှုယန္တရားတွင်အပြိုင်တူညီသောအိတ်နှစ်လုံးနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကြားနေလှောင်အိမ်တစ်ခုစီပါ ၀ င်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသည်လှုံ့ဆော်မှုခံရသောတိရစ္ဆာန်တစ်ခုဖြစ်သည် - အကျွမ်းတဝင်မရှိသောအထီး "သူစိမ်း" သို့မဟုတ်အတူနေထိုင်သောကာလအတွင်းအသုံးပြုသောအကျွမ်းတဝင်အထီး "မိတ်ဖက်" ။ အမျိုးသမီးများသည် ၃ နာရီကြာစမ်းသပ်မှုအတွင်းကိရိယာတန်ဆာပလာများတစ်လျှောက်လုံးလွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ပြီးလှုံ့ဆော်မှုခံရသောအထီးများသည်သူတို့၏အိတ်များအတွင်း၌ချည်နှောင်ထားခြင်းကြောင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးသူနှင့်သူစိမ်းသို့မဟုတ်သူစိမ်းတို့နှင့်ဘေးချင်းယှဉ်။ ဆက်သွယ်မှု၏ကြာချိန်ကိုနောက်ပိုင်းတွင်ဇီဝဗေဒအုပ်စုများကိုမသိသောလေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည့်စမ်းသပ်သူတစ် ဦး ကတွက်ချက်သည်။ တွဲဖက်၊ အကြိုက်နှစ်မျိုးရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်အရလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဦး စားပေးမှုကိုသူနှင့်သူစိမ်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ရာတွင်သိသိသာသာအချိန်ဖြုန်းခြင်းကိုဘာသာရပ်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ t-test ။ ထို့အပြင်သုံးအခန်းထဲကယန္တရားအတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအိမ်တော်အတွင်းခန်းထဲသို့အမျိုးသမီး၏ entries တွေကိုများ၏အရေအတွက်အားဖြင့်ညွှန်ပြ locomotor လှုပ်ရှားမှု၏ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြု, photobeam-sensor များတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ ဤသည် locomotor ရမှတ်အရှင်အဖြစ်လေ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနှင့်အခြားသူများကအသုံးပြုထိုကဲ့သို့သောယေဘုယျလှုပ်ရှားမှု, စိုးရိမ်စိတ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်၏ပြောင်းလဲတူးဖော်အဖြစ်အမျိုးသမီး '' အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါး putative အလယ်တန်းသက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြု12.
အမျိုးသမီးလျင်မြန်စွာယင်းသို့ခေါင်းဖြတ်စီရင်ခြင်းဖြင့်ယဇျပူဇျောခဲ့ကြနှင့်ဦးနှောက်ကိုချက်ချင်းခြောက်သွေ့တဲ့ရေခဲပေါ်မှာဖြည်နှင့်အေးခဲခဲ့ကြသည်။ မှု Coronal အပိုင်း (200 μm) တစ်ဦး cryostat အပေါ်ဖြတ်နှင်းခဲဏုဆလိုက်ပေါ်သို့တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းများ၌သည်အထိတစ် 1 မီလီမီတာအချင်းနှင့်အတူနှစ်နိုင်ငံတစ်ရှူးလာကြတယ်တစ်ခုလုံးကို NACC ထံမှ ယူ. putamen caudate, အဆုံးစွန်သောတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်ဧရိယာဖြစ်ခြင်းနှင့် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်း RNA နှင့်ပရိုတိန်းထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက် (Molecular သုတေသနစင်တာ, စင်စင်နာတီ, OH) အရအဆိုပါ Tri-ဓါတ်ကူပစ္စည်း protocol ကို အသုံးပြု. ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။
, -V10aR (SC-15 တစ် 8102% polyacrylamide ဂျယ်လ် (histones များအတွက် 1%) ရက်နေ့တွင်ခွဲခြာပြီးနောက်ပရိုတိန်းတစ် nitrocellulose အမြှေးပါးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးအောက်ပါမူလတန်းပဋိနှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီး: Anti-OTR ကို (1000 SC-1, 18096) 1: 500), -D1R (SC-33660, 1: 1000), -D2R (SC-9113, 1: 1000, Santa Cruz ဇီဝနည်းပညာ, Santa Cruz,, CA), -actin (A2066, 1: 1000, Sigma Aldrich ။ စိန့်လူးဝစ်, MO ကို), သို့မဟုတ် Anti-acetyl histone H3 (Lys14, # 06-911, 1: 1000) နှင့်စုစုပေါင်း H3 (# 05-928, 1: 1000, Millipore, Temecula,, CA) ။ အားလုံးပဋိ voles (81 ထံမှ 96% အထိ) homology မြင့်မားရာခိုင်နှုန်း share prairie သောလူသားများ, ကြွက်များနှင့်ကြွက်များအတွက်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုကြသည်။ တစ်ဦး HRP-conjugation အလယ်တန်း antibody ကိုအတူ Hybrid ပြီးနောက်အမြှေးပါး ECL (ECL SuperSignal အနောက်အီရတ်တွင်အလွှာ, ပီယပ် Biotechnology, Rockf သို့မဟုတ် d, IL) နဲ့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသည်နှင့် Fuji XAR ရုပ်ရှင် (Fuji Film, တိုကျို, ဂျပန်) ရက်နေ့တွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။ အရေအတွက် AIS 6.0 Image ကို software ကို (Imaging ကသုတေသနစိန့် Catharines, အွန်, ကနေဒါ) သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အချက်ပြမှုများစုစုပေါင်း histone H3 signal ကိုမှပုံမှန်ခဲ့သည့် acetyl-H3 signal ကို မှလွဲ. actin မှတူညီသောအမြှေးပါးအတွင်းပုံမှန်ခဲ့ကြသည်။ ပုံမှန်ဒေတာထို့နောက် CSF-ကုသတိရစ္ဆာန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
semi-အရေအတွက် Real-time polymerase ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှု (RT ကို-PCR)
စုစုပေါင်း RNA ၏ 0.5 μg complementary DNA ကိုပေါင်းစပ်ဘို့လုပ်ငန်းများ၌, ပြီးတော့အရင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်50 အဆိုပါ nicotinamide အက်ဒနင်း dinucleotide dehydrogenase (နတေစျဆငျ့) မျိုးဗီဇမှပုံမှန်အတူ။ အားလုံးတုံ့ပြန်မှု triplicates ၌ပြစ်မှားမိခဲ့ကြနှင့်သူတို့၏တိကျတဲ့တစ် 2% Agarose ဂျယ်လ်အပေါ်ကွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ခွဲခြာအရည်ပျော်ကစိစစ်။ 5'-TCCAAGGCCAAAATCCGCACGG-3 '(ထပ်ဆင့်ပို့) နှင့် 5'-GGCAGAAGCTTCCTTGGGCGC-3' 'OTR ကိုများအတွက် (Rev), 5'-GAGGTGAACAATGGCACTAAAACC-3' (များအတွက်) နှင့် 5'-CCAGATGTGGTAGCAGATGAAGC-3 '' ကိုအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုအဆိုပါ primer ပာခဲ့ကြ '(များအတွက်) နှင့် 1'-CGGTGTGTTCATCATCTGCT-5' 'D3R, 5'-GTGAAGGCGCTGTAGAGGAC-3 များအတွက် AVP1aR များအတွက် (Rev), 5'- TTAACAACAATGGGGCTGTG-3' (များအတွက်) နှင့် 5'-GGCATGAGGGATCAGGTAAA-3 '(Rev) (Rev ) D2R နှင့် 5'-CTATTAATCCCCGCCTGACC-3 များအတွက် '(များအတွက်) နှင့် 5'-GGAGCTCGATTTGTTTCTGC-3' (Rev) နတေစျဆငျ့အဘို့။ ပုံမှန်ဒေတာ CSF-ကုသတိရိစ္ဆာန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
NACC အတွက် Histone H3 acetylation (Lys14) နှင့် putamen တစ်ရှူးလာကြတယ် caudate ထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်အောက်ပါမဂ္ဂနာ chip ပရိုတိန်း, G တစ်ရှူး Kit (Millipore, Temecula,, CA) ကို အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ အတိုချုပ်, 1% Formaldehyde နှင့်အတူ crosslinking ပြီးနောက်, chromatin 2000-200 BP ၏အပိုင်းအစတစ်ခု Misonix XL-600 သုံးပြီး sheared ခဲ့သည်။ acetylated histone H3 (Lys14) ၏ immunoprecipitative ပြီးတော့နေ့ချင်းညချင်း 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာဆန့်ကျင် acetyl-H3 (Lys14) antibody ကို (Millipore) ၏4μgနှင့်အတူသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ လျှော်ပုတီးနှင့် Cross-link ကို၏ပယ်ဖျက်ခံရထံမှ elution ပြီးနောက် DNA ကိုထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှထည့်သွင်းမှုနမူနာကနေဖန်ဆင်းတော်အနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးစံကွေးနှင့်အတူ (အထကျကိုကြည့်ပါ) တစ်ဦး iCycler platform ပေါ်တွင် RT ကို-PCR အားဖြင့် triplicates အတွက်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည် immunoprecipitated ။ အဆိုပါ primer မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole နဲ့ OTR (များအတွက်ပထမဦးဆုံး exon နိုင်တဲ့ coding ၏အထက်ပိုင်း 236 BP တည်ရှိသော 128 BP-ရှည်လျားဒေသများကိုချဲ့ထွင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြoxtr, Genbank ်နိုင်ရေး #AF079980), သို့မဟုတ် 192 BP-ရှည်လျားဒေသမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole V141aR (များအတွက်ပထမဦးဆုံး exon နိုင်တဲ့ coding ၏အထက်ပိုင်း 1 BP တည်ရှိသည်avpr1a, Genbank ်နိုင်ရေး #AF069304) ။ အဆိုပါပာနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ခဲ့ကြသည်: 5'-CTCCGGAGCCGGGGCTAAGT-3 '(ထပ်ဆင့်ပို့) နှင့် 5'-ACCGCTTCCCCGAGAGTAGGG-3' (Rev) အတွက် oxtrနှင့် 5'-GGTGGACCAGCCAGACCCCA-3 '(ထပ်ဆင့်ပို့) နှင့် 5'-TGCAGAGCCAGGCGCTTTCC-3' (Rev) အတွက် avpr1a။ တစ်ခုချင်းစီကိုနမူနာသက်ဆိုင်ရာထည့်သွင်းမှုတနျဖိုးအားဖြင့်ပုံမှန်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ဒေတာများပြီးတော့ CSF-ကုသတိရိစ္ဆာန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
မိတ်ဖက် preference ကို၏စမ်းသပ်မှုအဘို့, တွဲပြီးကာလအတွင်းသို့မဟုတ်နေရာထား cannulae နှင့်အတူမိတ်လိုက်အပြုအမူတွေပြသကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်အဖြစ်ဖော်ထုတ်သည့်အခါရှိသမျှသည်အခြားသောမော်လီကျူးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်, ဇီဝဗေဒအုပ်စုတစ်စုနှုန်းနဲ့တဦးတည်းဒေတာအချက်အများဆုံးဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်အများစုဟာရလဒ်များအလွန်ရှင်းလင်းသောအခါ မှလွဲ. ပုံတူကူးယူခဲ့သညျ။ အဆိုပါမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေနှင့်အတူ side-by-side အဆက်အသွယ်သုံးစွဲအချိန်နှစ်အမြီးစုံတွဲနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည် t-test ။ အဆိုပါရွေ့လျားရမှတ်နှစ်အမြီးသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် t-test (အုပ်စုနှစ်စုများအတွက်) သို့မဟုတ် (ထက်ပိုမိုအုပ်စုနှစ်စုများအတွက်) တစ်လမ်း ANOVA နှင့်တဲ့အခါမှာသင့်လျော်တဲ့, Fischer ရဲ့ PLSD Post-hoc စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဓိပ်ပာယျခုံနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့သည် P <0.05 ။ ပုံမှန်အတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ အခြားဒေတာအားလုံးကိုနှစ်လုံးသုံးလုံးနဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့တယ် tကြိုတင်စမ်းသပ်ပြီးတန်းတူသို့မဟုတ်မညီမျှမှုကှဲလှဲယူဆ -test ။ အားလုံးစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ StatView software ကို (SAS Institute က) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ဒေတာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု (CSF, ဆားသို့မဟုတ်အဖော်ရှာအုပျစုမြား၏%) မှစံနေကြသည်သောအခါ, စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ကုန်ကြမ်းဒေတာကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
ဤလုပ်ငန်းကိုကျနော်တို့ကိုလည်း OTR ကိုရန် OTA (T) ၏ရက်ရောသောဆုကြေးဇူးကိုဒေါက်တာမောရစ် Manning ကျေးဇူးတင် ZW မှ MK နှင့် ZW မှ MHR21-083128 ပေးအပ်နှင့် MHR01-058616 စိတ်ကျန်းမာရေး (NIMH) ၏အမျိုးသားအင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည်။
HW, FD နှင့် YL အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ HW နှင့် FD ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ HW, FD, ZW နှင့် MK လေ့လာမှုဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ FD, ZW နှင့် MK စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။ စာရေးသူအားလုံးရလဒ်ဆွေးနွေးလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပေါ်တွင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါသည်။
1 ။ Bora အဘိဓါန်အီး, Yucel M က, Allen က NB ။ လူ့ Affiliate အပြုအမူ၏ Neurobiology: စိတ်ရောဂါမမှန်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှုအတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2009; 22: 320-325 ။ [PubMed]
2 ။ သောမတ်စ်ဂျာ Birney EC ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏မိဘစောင့်ရှောက်မှုနှင့်မိတ်လိုက်သည့်စနစ်, (Microtus ochrogaster) အပြုအမူဂေဟဗေဒနှင့် Sociobiology ။ 1979; 5: 171-186 ။
3 ။ Getz ll, Hofmann je ။ အခမဲ့-နထေိုငျမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျး, (Microtus ochrogaster) အပြုအမူဂေဟဗေဒနှင့် Sociobiology ။ 1986; 18: 275-282 ။
4 ။ Williams က JR, Catania KC, Carter က CS ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) တွင်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး: လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 1992; 26: 339-349 ။ [PubMed]
5 ။ လူငယ်တို့ Ka, Gobrogge KL, လျူ Y ကို, ဝမ် Z. pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology: တစ်လူမှုရေးအရ monogamous ကြွက်ထံမှ Insights ။ Neuroendocrinology အတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2011; 32: 53-69 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6 ။ လျူ Y ကို, Curtis JT, ဝမ် Z. Vasopressin ကတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း (Microtus ochrogaster) အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံထိန်းညှိ။ 2001; 115: 910-919 ။ [PubMed]
7 ။ Lim က MM, Young က LJ ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအခြေခံ Vasopressin-မှီခိုအာရုံကြောဆားကစ်။ neuroscience ။ 2004; 125: 35-45 ။ [PubMed]
8 ။ လျူ Y ကို, ဝမ် ZX ။ နျူကလိယမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိဖို့ oxytocin နှင့် dopamine interactive accumbens ။ neuroscience ။ 2003; 121: 537-544 ။ [PubMed]
9 ။ Gingrich B, လျူ Y ကို, Cascio ကို C, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine D2 receptors အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှု (Microtus ochrogaster) အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံများအတွက်အရေးကြီးလှသည်။ 2000; 114: 173-183 ။ [PubMed]
10 ။ et al Aragona BJ ။ နျူကလိယ dopamine differential monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates accumbens ။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 133-139 ။ [PubMed]
11 ။ လျူ Y ကို, et al ။ နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens ။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2010; 107: 1217-1222 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Keebaugh AC အ, Young က LJ ။ Pre-pubertal အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးပွားလာ oxytocin အဲဒီ receptor စကားရပ်လူကြီးများအဖြစ် alloparental တုန့်ပြန်နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2011; 60: 498-504 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ et al Ross ကသူ။ နျူကလီးယပ် Accumbens အတွက် oxytocin receptor Density အတွက်အပြောင်းအလဲ Monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. Voles အတွက် Affiliate အပြုအမူအပေါ် Differential သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2009; 29: 1312-1318 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ et al Pitkow LJ ။ တစ်ဦး Monogamous Vole ၏ Ventral Forebrain သို့ Vasopressin receptor မျိုးရိုးဗီဇလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်ဆက်နွယ်မှုနှင့် Pair ကို-ဘွန်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏နည်းပြ။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2001; 21: 7392-7396 ။ [PubMed]
15 ။ Veenema AH ။ အစောပိုင်းဘဝလူမှုရေးအတွေ့အကြုံများ oxytocin- ပြောင်းလဲနှင့် vasopressin-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်လူမှုရေးအပြုအမူတွေကိုဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ဆီသို့။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2012; 61: 304-312 ။ [PubMed]
16 ။ Francis က DD, Young က LJ, Meaney MJ, Insel TR ။ ကျားကွာခြားချက်များ: မိခင်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်သဘာဝကွာခြားချက်များ oxytocin နှင့် Vasopressin (V1a) receptor ၏ဖော်ပြမှုနှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့နေကြသည်။ Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ်။ 2002; 14: 349-353 ။ [PubMed]
17 ။ et al ရှမ်ပိန်အက်ဖ်အေ။ အဆိုပါ estrogen receptor-α1b Promoter ၏ methyl နှင့်အတူမိခင်စောင့်ရှောက်မှု Associated နှင့်အမျိုးသမီးအနွှယ်၏ Medial Preoptic ဧရိယာထဲမှာ estrogen receptor-α Expression ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2006; 147: 2909-2915 ။ [PubMed]
18 ။ Murgatroyd ကို C, et al ။ dynamic DNA methylation အစီအစဉ်များအစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုမြဲဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ။ နတ် neuroscience ။ 2009; 12: 1559-1566 ။ [PubMed]
19 ။ et al ရက်ကန်းဟု ICG ပြော။ မိခင်အပြုအမူအားဖြင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ် programming ကို။ နတ် neuroscience ။ 2004; 7: 847-854 ။ [PubMed]
20 ။ ရက်ကန်းဟု ICG ပြော, Meaney MJ, Szyf အမ်မိခင်လူကြီးအတွက်နောက်ပြန်လှည်သောအမျိုးအနွယ်အတွက် hippocampal transcriptome နှင့်စိုးရိမ်စိတ်-mediated အပြုအမူတွေအပေါ်သက်ရောက်မှုဂရုမစိုက်။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2006; 103: 3480-3485 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Bonthuis PJ, Patteson JK, Rissman EF ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception ၏သိမ်းယူမှု: Chromatin Acetylation, estrogen receptor-αနှင့်သားအိမ်ဟော်မုန်း၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2011; 152: 3172-3181 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ Zhong က S, Fields CR, စု N က, ပန် YX, Robertson က KD ။ မျိုးဗီဇစကားရပ်ကိုအတူ coupled ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်မွမ်းမံ၏ Pharmacologic တားစီး, အဆုတ်ကင်ဆာအတွက်ထစ်အငေါ့ DNA methylation နှင့် histone deacetylation ၏ဝတ္ထုပစ်မှတ်ဖော်ပြသည်။ Oncogene ။ 2007; 26: 2621-2634 ။ [PubMed]
23 ။ Yoshida M က, Horinouchi S က, Beppu တီ Trichostatin A နှင့် trapoxin: chromatin ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုအတွက် histone acetylation ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့ဝတ္ထုဓာတုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ Bioessays ။ 1995; 17: 423-430 ။ [PubMed]
24 ။ Monneret C. Histone deacetylase inhibitors ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2005; 40: 1-13 ။ [PubMed]
25 ။ et al Ross ကသူ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် Affiliate အပြုအမူထိန်းညှိသည့် oxytocin စနစ်၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ neuroscience ။ 2009; 162: 892-903 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ လူငယ်တို့ LJ, Huot B, Nilsen R ကို, ဝမ် Z ကို, Insel TR ။ Promoter အစီအစဉ်အလိုက်နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း: ဗဟို oxytocin receptor မျိုးရိုးဗီဇဖော်ပြမှုအတွက်မျိုးစိတ်ကွာခြားချက်များ။ Neuroendocrinology ၏ဂျာနယ်။ 1996; 8: 777-783 ။ [PubMed]
၂၇။ Witt O၊ Deubzer HE၊ Milde T နှင့် Oehme I. HDAC မိသားစု။ ကင်ဆာနှင့်သက်ဆိုင်သောရည်မှန်းချက်များမှာအဘယ်နည်း။ ကင်ဆာစာများ။ 27; 2009: 277-8 ။ [PubMed]
28 ။ et al Vecsey CG ။ Histone Deacetylase inhibitors CREB မှတဆင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့် Synaptic ပလပ်စတစ် Enhance: CBP-မှီခိုမှတ်တမ်း Activation ။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 2007; 27: 6128-6140 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29 ။ Monsey က MS, အုတ KT, Akingbade လျှင်, ဟောင်ကောင် ES, Schafe GE ။ ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲသည့် Lateral Amygdala အတွက်ကြောက်လန့်မှတ်ဉာဏ် Consolidated နှင့် Synaptic ပလပ်စတစ်အဘို့အဝေဖန် Are ။ PLoS ONE ။ 2011; 6: e19958 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ ဗန် Plus ကိုကို C, Emiliani S က, Verdin အီးဆယ်လူလာမျိုးဗီဇ၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်း၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး histone hyperacetylation တုံ့ပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဗီဇ Expression ။ 1996; 5: 245-253 ။ [PubMed]
31 ။ Mariadason JM, ထောင့် GA, Augenlicht LH ။ က Short chain fatty acids များကသွေးဆောင် colon ဆဲလ်ရင့်ကျက်၏ Pathways အတွက်မျိုးဗီဇ Reprogramming: Trichostatin တစ်ဦးက, Sulindac နှင့် Curcumin နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် Colon ကင်ဆာ၏ Chemoprevention များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ကင်ဆာသုတေသန။ 2000; 60: 4561-4572 ။ [PubMed]
32. Halsall J, Gupta V, O'Neill LP, Turner BM, Nightingale KP ။ HDAC ဟန့်တားမှုဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့် Global Histone Hyperacetylation မှမျိုးဗီဇများကိုကာကွယ်လေ့ရှိသည်။ PLOS ONE ။ 2012; 7: e33453 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ Ito ကငွေကျပ်, Adcock ဗြဲ Histone acetylation နှင့် histone deacetylation ။ မော်လီကျူးဇီဝနည်းပညာ။ 2002; 20: 99-106 ။ [PubMed]
34 ။ Molfese DL ။ ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းမှတဆင့်အာရုံကြောသိပ္ပံတိုးတက်: သင်ယူနှင့် Memory ၏မော်လီကျူးယန္တရားများ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Neuropsychology ။ 2011; 36: 810-827 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
35 ။ လူငယ်တို့ LJ, Lim က MM, Gingrich B, Insel TR ။ လူမှုနှောင်ကြိုး၏ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2001; 40: 133-138 ။ [PubMed]
ငါလူတန်းစား deacetylases ၏ 36. ဟော့ကင်း JD, Florian ကို C, Abel တီ Post- လေ့ကျင့်ရေး intrahippocampal တားစီးရေရှည်အရာဝတ္ထု - တည်နေရာမှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေပါတယ်။ သင်ယူခြင်း & မှတ်ဉာဏ်။ 2011 ခုနှစ်; 18: 367-370 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ Stefanko DP, Barrett RM, Ly AR, Reolon GK, Wood ကနေ MA ။ HDAC တားစီးကနေတဆင့်အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၏ Modulation ။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2009; 106: 9447-9452 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38 ။ ယန် XJ, Seto အီး Lysine Acetylation: အခြား Posttranslational ပြုပြင်မွမ်းမံနှင့်အတူ Codified Crosstalk ။ မော်လီကျူးဆဲလ်။ 2008; 31: 449-461 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ cho ဟာ MM, DeVries AC အ, Williams က JR, Carter က CS ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးအပေါ် oxytocin နှင့် vasopressin ၏ဆိုးကျိုးများ (Microtus ochrogaster) အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1999; 113: 1071-1079 ။ [PubMed]
40 ။ Insel TR, Hulihan တီဂျေ။ pair တစုံဘွန်းများအတွက်တစ်ဦးကကျား, မ-တိကျတဲ့ယန္တရား: monogamous voles အတွက် oxytocin နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1995; 109: 782-789 ။ [PubMed]
41 ။ Stimson L ကို, la Thangue NB ။ HDAC inhibitors မှလက်တွေ့တုံ့ပြန်မှုခန့်မှန်းဘို့ Biomarkers ။ ကင်ဆာပေးစာ။ 2009; 280: 177-183 ။ [PubMed]
42. Iannitti T, Palmieri ခလက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်ချက်ဆိုဒီယမ် Phenylbutyrate ။ R & D အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ 2011; 11: 227-249 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
43 ။ Kumar ကတစ်ဦး, et al ။ Chromatin ပုံစံသစ်ပြုပြင်ရေး Striatum အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်ပလပ်စတစ်အရင်းခံကျတာကတော့တစ်ဦး Key ကိုယန္တရားသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 48: 303-314 ။ [PubMed]
44 ။ အဆိုပါကြွက်များတွင် Schroeder အက်ဖ်အေ, Lin က CL, အ Histone Deacetylase တား၏ Crusio WE, Akbarian အက်စ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants-လိုပဲအကျိုးသက်ရောက်မှု, ဆိုဒီယမ် Butyrate ။ ဟားဗတ်။ 2007; 62: 55-64 ။ [PubMed]
45 ။ Manning က M, et al ။ Peptide နဲ့ Non-peptide agonists နှင့်ရန်အတွက် vasopressin နှင့် oxytocin V1a, V1b, V2 နှင့် OT receptors: သုတေသနကိရိယာများနှင့်အလားအလာကုထုံးအေးဂျင့်။ ခုနှစ်တွင်: Inga DN, Rainer L ကို, အယ်ဒီတာများ။ ဦးနှောက်သုတေသနအတွက်တိုးတက်မှုကို။ Elsevier; 2008 ။ စစ။ 473-512 ။ [PubMed]
46 ။ Witt DM, Insel TR ။ အမျိုးသမီးလိင်အပြုအမူတစ်ခုရွေးချယ် oxytocin ရန် attenuation ချို့ယွင်းသောနည်းပြ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1991; 128: 3269-3276 ။ [PubMed]
47 ။ Winslow JT မိပြီ N ကို, Carter က CS, Harbaugh CR, Insel TR ။ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဗဟို vasopressin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 1993; 365: 545-548 ။ [PubMed]
ဆက်နွယ်မှုများအတွက် 48. Insel T. Oxytocin- တစ် ဦး neuropeptide: အပြုအမူ, အဲဒီ receptor autoradiographic နှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများကနေသက်သေအထောက်အထား။ Psychoneuroendocrinology ။ 1992; 17: 3-35 ။ [PubMed]
49 ။ Insel T က, ဝမ် Z ကို, microtine ကြွက်များတွင်လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးနဲ့ဆက်စပ်ဦးနှောက် vasopressin အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူး၏ကူးတို့ C. ပုံစံများ။ အာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်။ 1994; 14: 5381-5392 ။ [PubMed]
50 ။ Holly က F, Duclot က F, Gunjan တစ်ဦးသည်ကြွက် hippocampus အတွက် anhedonia နှင့် histone acetylation အပေါ်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် Kabbaj အမ်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2011; 59: 331-337 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]